Boos celinta hudheelka ee khadka tooska ah ugu fiican, ha bixin wax intaa ka badan ciidahaaga
U isticmaal mashiinka raadinta hudheelkaaga
Miyaad ka fikireysaa inaad safar gasho oo aadan garanayn meel aad ka bilowdo? Hagaag, sida sheekooyinka waaweyni sheegaan, waanu samayn doonaa tan iyo bilowgii. Mid ka mid ah waxyaabaha ugu horreeya ee aan walaac ka qabno ayaa ah hudheelo hudheello. Shaki la'aan, marwalba waan rabnaa hel hudheelo jaban in ay leeyihiin xaalado kaamil ah sidaa darteed joogitaankeennu waa mid aan la ilaawi karin. Maanta waan kaa caawinaynaa!
Halkan guji si aad ugu ballansatid qiimaha ugu fiican ee internetka
Sida looga helo hudheelo jaban internetka
Marka ay tahay raadinta hudheel wanaagsan oo loogu talagalay fasaxyadeenna soo socda, mar dambe uma sii baahnaan doonno inaan saacado ku qaadanno fiirinta dhinac ama dhinac kale. Hadda waxaad diiradda saari kartaa dhammaan dadaalkaaga howlaha kale ee aadka u xiisaha badan.
Haddii aadan maskaxda ku hayn hudheel gaar ah, naftaada ha u hoggaansamaan annaga mashiinka raadinta hoteelka. Xaaladdan oo kale, waxay noqon doontaa sida ugu dhakhsaha badan uguna fudud ee aad ku heli karto dhammaan macluumaadka hal guji oo keliya.
Ikhtiyaar kale oo lagu helo hoteelada ugu fiican Waxay ku jirtaa hay'adaha khadka tooska ah. Dabcan, markale, waa inaad ka fikirtaa markasta oo ay jiraan dhex dhexaadiyayaal noocan ah, qiimuhu wuu kici doonaa.
Waxaad awoodi kartaa tag bogga hudheelka Dabcan, marmarka qaarkood, had iyo jeer kuuguma deeqayaan faa'iidooyinka ama qiimaha aan dhammaanteen arki karno.
Tallaabooyinka aasaasiga ah ee lagu helo hudheelada jaban ee khadka tooska ah
Damaashaadka: Kahor sii qabsashada, Had iyo jeer way wanaagsan tahay in wax yar la barto meesha aan fasax u aadeyno. Raadi macluumaad haddii ay dhacdo nooc kasta oo dhacdo ah oo ka jirta aaggaas la doortay. Tani waa sababta oo ah haddii ay sidaas tahay, qiimayaashu way qaali noqonayaan.
Magaalooyinka dhow: Haddii aad ugu dambeyntii hesho taas, kuwa taariikhda fasaxaaga, Meesha loo socdo waa xafladaha maxaa yeelay waa inaad raadisaa bedel kale. Fikradda ugu fiican ayaa ah in la doorto magaalooyinka ku hareeraysan. Sidan oo kale, waanu ku dhowaan doonnaa oo waxaan ku qaadan doonnaa wax ka yar hoteelka.
Horumar: Shaki la'aan, markii aan horay u ogaanay oo aan cadeynay halka aan u safri doonno, markaa waxaa ugu wanaagsan in si dhaqso leh loo dhigto. Horumarku wuxuu naga badbaadin karaa inaan ka baxno qolka riyada. Hubi heshiisyo hudheel loo wada dhan yahay ama quraac uun ah. Tan awgeed, waxaan hadda ku xulan karnaa baahiyaheena.
Hostels ama hawlgab: Waxaan horey u ognahay inaan wada kar karno riyo hudheel weyn, laakiin hubaal in badan oo naga mid ah, waxay ka bixi lahayd miisaaniyadda. Marka, waxaa la joogaa waqtigii aad cagaha dhulka dhigi lahayd oo aad raadin lahayd beddelaadyo kale. Haddii maalinta oo dhan aad ku qaadan doontid hal meel ilaa meel kale, waxaa ugu wanaagsan inaad doorato dalabyada hoteelka. Waxa ugu fiican ayaa noqon doona waxa loogu yeero hoteelada ama howlgabnimada. Meelo ku habboon in lagu maydho oo lagu nasto saacado ku filan.
Carruurta bilaash ah: Haddii aad la safreyso carruur, waxaa habboon in la raadiyo xulashooyinka noo oggolaanaya hoos u dhaca qiimaha. Waxay kuxirantahay da'da, way badan yihiin hudheelada qiimaha jaban Wax lacag ah kaa qaadi maayaan kan yar in uu ku seexdo isla qolka. Kaliya waa inaad si dhow u fiirisaa siyaasadooda xaaladaha.
Sidee loo ballansadaa hoteelka khadka tooska ah?
Maanta nasiib ayaan u helnay internetka. Shaki la'aan, mid ka mid ah qalabka ugu fiican ee nolosha ka dhigaya mid fudud. Markaad safreyso, waxaan sidoo kale aragnaa cirka oo furan. Waad rabtaa hudheelka ka qabso khadka tooska ah? Hagaag, waa tan ugu fudud.
Haddii aad horey u eegtay oo aad horey u laheyd hudheelka aad ugu baahan tahay fasaxaaga, markaa talaabada xigta waa inaad sameyso boos celin. Si aanan u noqon leexleexasho badan oo maskax la'aan ah, waxaan doorannay mashiin raadinta hudheelkahalkan guji si aad uhesho oo aad ugu qorto qiimaha ugu fiican). Shaqada oo dhan ayuu noo qabanayaa. Waxaan ubaahanahay oo keliya inaan galno meesha loo socdo waana intaas. Haddii aad dooratay, waxaad la imaan doontaa tiro badan xulashooyinka hudheelka. Dhexdooda, waxaad arki kartaa dhammaan sifooyinkiisa. Laga soo bilaabo goobta illaa sawirada ugu fiiqan si aad fikrad uga hesho. Markaad go aansato, waa inaad doorataa midka kuugu qancinaaya. Markaad gujiso xulashadan, waxaad heli doontaa bog cusub oo aad awoodid dooro qolka. Halkaas waxaad ka hubin kartaa dhammaan wixii bilaash ah iyo sidoo kale maalmaha la heli karo. Dhammaan macluumaadkaan, waxaad ku dooran kartaa qaab aad u fudud oo fadhigaaga ka soo baxa. Markaad wax walba daboosho, kaliya waa inaad gujisaa aqbalaadda boos celintuna waxay noqon doontaa mid wax ku ool ah.
Dib u eegista huteelka khadka tooska ah
Mid kale oo ka mid ah awoodaha marka la sameynayo boos celinta hudheelka ayaa ah in yar la akhriyo fikradaha ay ka tagayaan macaamiisha. Dabcan, had iyo jeer maahan kuwa ugu guusha badan waana taas, in dhadhanka qofna uusan xukumin. Weli, waxaad fikrad ka heli kartaa waxyaabaha ugu caansan meesha aad dooratay. Sida caadiga ah, waxyaabaha sida nadaafadda iyo buuqa badanaa waa laga wada hadlayaa. Laba qodobbada muhiimka ah markay tahay xulashada hal meel ama mid kale.
Dhinaca kale, sidoo kale waa muhiim inay leeyihiin a 24 saac soo dhaweyn. In kabadan waxkasta maxaa yeelay ma ogin goorta aan imaaneyno iyo hal mar meesha, xaqiiqdii waxaan banaanka ku maqnaan doonnaa mudo ka dheer gudaha. Si la mid ah, waxaa lagama maarmaan ah in wax laga weydiiyo xarumaha iyo sida wanaagsan ee looga faa’iideysto. Waxaan sidoo kale tan uga heli doonnaa qiimeyn bogagga faallooyinka. Mararka qaarkood waxaa la doorbidaa in wakhti yar lagu qaato wax akhriska, maxaa yeelay waxaad arki doontaa sida ay macluumaadku ugu bilaabanayaan inay is muujiyaan. Waa hab ku habboon oo fikrad looga helo meesha, ka hor intaadan halkaas joogin.